“Ma Jecli inaan la shaqeeyo ciyaartoyda aanan dooneyn inay joogaan.”. Guardiola oo fasaxay Kolarov – Gool FM
“Ma Jecli inaan la shaqeeyo ciyaartoyda aanan dooneyn inay joogaan.”. Guardiola oo fasaxay Kolarov
Byare July 21, 2017
(Houston) 21 Luulyo 2017. Pep Guardiola ayaa ka dhawaajiyay inuu u ogolaanayo Aleksandar Kolarov inuu ku biiro kooxda AS Roma isagoona sheegay inuusan marna jeclayn inuu la shaqeeyo ciyaartoyda aanan dooneyn inay la joogaan.
Tababaraha reer Spain ayaa ciyaartii dhaweyd ee Man United iyo Man City kaddib shaaca ka qaaday in Kolarov uu waydiistay inuu kooxda ka tago.
“Ma heysano dooq kale,” Guardiola ayaa sidaa ka yiri shirka jaraa’id.
“Ma heysano daafacyo ka ciyaarta garbaha, waxaan isku daynaya inaan soo iibsano daafacyo ka ciyaara dadabka midig, ma ahan uun Kyle Walker, maxaa yeelay saddexda kale ee daafaca garabka oo aynaan heshiiska u kordhin.
“Kolarov hal talaako ayuu u jiraa inuu ku biiro Roma, taasina waa sababta aynaan u heysan dooqyo kale.
“Ma jecli inaan la joogo ciyaartoyda aanan dooneyn inay joogaan, taasina waa sababta ay dooqa ugu fiican u tahay qofkasta. Tan ugu fiican ayaan u rajeynayaa maxaa yeelay waa xariif fiican dhabtii. Waxaynu leenahay xiriir heer sare ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan tababar siiyo isaga tan ugu fiican ayaan u rajeynayaa isaga iyo qoyskiisa.
“Ma jecli inaan la shaqeeyo kuwa aanan dooneyn inay joogaan, Kola wax badan ayuu I caawiyay fasal ciyaareedkii hore marka la fiiriyo waxyaabo aad iyo aad u badan. Laakiin wuxuu heystaa fursad wayn uu dib ugu laabanayo Roma halkaa uu joogi jiray kol hore wuuna ila hadlay aniga iyo kooxda wuxuuna I waydiistay inuu tago.”.
DAAWO: 2-da gool ay Man United uga adkaatay dariskooda Man City…..(Lukaku oo goolashiisa sii wata)
“Waxaan sugayaa saxiixyo kale oo cusub.”. Jose Mourinho